बहुप्रतिक्षित चन्द्रागिरी हिल्सको आइपिओ मंसिर १७ गतेदेखि खुल्ला
गोठालो खबर -२ २०७७ मङ्सिर १०, बुधबार,०२:१७:PM
मङ्सिर १०, काठमाण्डौ। बहुप्रतिक्षित चन्द्रागिरी हिल्सको आइपिओ मंसिर १७ गतेदेखि बिक्रि खुल्ला गरिएको छ। कम्पनीले दुई चरणमा आइपिओ निष्काशन गर्ने छ।पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरुका र दोश्रो चरणमा अरु सर्वसाधारण को लागि बिक्रि खुल्ला गर्नेछ। यो पहिलो चरणको आइपिओमा स्थानीयहरुका लागि ३ लाख ६ हजार ८१९ कित्ता शेयर निष्काशन निष्काशन गरेको हो ।
स्थानीयको लागी बिक्री खुल्ला गरिएको आइपिओमा काठमाडौं जिल्लाका चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नंम्बर ३, ४, ६ र ७ साविक थानकोट गाविसका सम्पूर्ण वडा र साविक महदेवस्थान गा.वि.स.को वडा नं. ३, ४, ५, ६, ७, ८, एवं मकवनपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका वडा नं. ९ र १० र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं ५ का स्थानियले मात्रै यो आइपिओमा आवेदन दिन पाउनेछन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपीओ निष्काशन गर्न कार्तिक २८ गते अनुमति पाएको आईपीओमा आवेदन दिन छिटोमा पुस १ गतेसम्म र ढिलोमा पुस १६ गतेसम्मको समय तोकिएको छ। बिक्री प्रबन्धक रहेको ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले न्युनतम १० कित्ता देखि अधिकतम ३ हजार ६० कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ ।